KEDU IHE Ị GA-EME NA NJEHIE AHỤ &QUOT;NJEHIE OKPOMỌKỤ NKE CPU&QUOT; - NHAZI - 2019
Na-edozi njehie CPU nke na-ekpo ọkụ
A ga-ehichapụ ihe nchọgharị ọ bụla site na faịlụ oge. Tụkwasị na nke ahụ, nhicha mgbe ụfọdụ na-enyere aka dozie nsogbu ụfọdụ na enweghị ike nke ibe weebụ, ma ọ bụ na-egwu vidio na ọdịnaya egwu. Ihe ndị dị mkpa iji nhichaa ihe nchọgharị ahụ bụ iwepu kuki na faịlụ echekwara. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi kpochapụ kuki na cache na Opera.
Nhicha site na nyocha ihe nchọgharị
Ụzọ kachasị mfe iji kpochapụ kuki na faịlụ ndị echekwara bụ iji dozie ngwá ọrụ ọkọlọtọ Opera site na nyocha ihe nchọgharị.
Iji malite usoro a, gaa na isi Opera menu, site na ndepụta ya họta ihe "Ntọala". Ụzọ ọzọ iji nweta ntọala ihe nchọgharị bụ pịa Alt P na keyboard kọmputa.
Ime mgbanwe na ngalaba "Nche".
Na windo nke meghere, anyị na-ahụ ìgwè nke ntọala "Nzuzo", nke bọtịnụ "Kpechapụ akụkọ nleta nke nleta" kwesịrị ịdị. Pịa ya.
Window na-enye ike ihichapụ ọtụtụ ọnụọgụ abụọ. Ọ bụrụ na anyị họrọ ha niile, mgbe ahụ na mgbakwunye na ihichapụ kuki na nhichapụ kuki, anyị ga-ehichapụ akụkọ ihe mere eme nke ibe weebụ, okwuntughe gaa na ebe nrụọrụ weebụ, na ọtụtụ ozi ndị ọzọ bara uru. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ dịghị anyị mkpa ime nke a. Ya mere, anyị na-ahapụ ihe edeturu n'ụdị nlele naanị na nso ntinye "Ihe oyiyi na faịlụ", na "Kuki na saịtị data ndị ọzọ." Na windo oge, họrọ uru "site na mmalite". Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ achọghị ihichapụ kuki na cache, ma naanị data maka ụfọdụ oge, ọ na-ahọrọ ihe okwu kwekọrọ. Pịa bọtịnụ "Kpechapụ akụkọ nleta nke nleta".
Usoro nke ihichapụ kuki na cache na-apụta.
Ntucha nyocha nyocha
Enwekwara ike iji aka wepụ Opera site na kuki na faịlụ echekwara. Ma, maka nke a, anyị ga-ebu ụzọ chọpụta ebe kuki na cache dị na draịvụ ike kọmputa ahụ. Mepee ihe nchọgharị weebụ ma họrọ ihe "Banyere usoro ihe omume".
Na window nke meghere, ị nwere ike ịchọta ụzọ zuru ezu nke nchekwa ahụ na cache. E nwekwara ihe ngosi nke ụzọ na ndekọ nke profaịlụ nke Opera, nke nwere faịlụ na kuki - Kuki.
A na-etinye cache na ọtụtụ okwu na nchekwa na ụzọ na usoro ndị a:
C: Ọrụ (aha profaịlụ onye ọrụ) AppData Obodo Opera Software Opera Stable. Iji onye njikwa faili ọ bụla, gaa na ndekọ a ma hichapụ ihe niile dị na nchekwa Opera Stable.
Gaa na profaịlụ nke Opera, nke a na-ahụkarị n'okporo ụzọ C: ndị ọrụ (aha profaịlụ onye ọrụ) AppData Roaming Opera Software Opera Stable, na ihichapụ faịlụ Cookies.
N'ụzọ dị otú a, kuki na faịlụ echekwara ga-ehichapụ na kọmputa.
Kpochapụ kuki na cache na Opera na enyemaka nke mmemme ndị ọzọ
A kpochapụrụ kuki na cache site na iji ọrụ ndị ọkachamara pụrụ iche iji kpochapụ usoro. N'etiti ha, ihe dị mfe nke ngwa ahụ ka e gosipụtara ngwa ngwa CCleaner.
Mgbe ịmalite Graleaner, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ kacha kuki na Oche cache, wepụ ihe nlele niile si na ndepụta nke parameters ka a kpochapụrụ na taabụ "Windows".
Mgbe nke ahụ gasịrị, gaa na "Ngwa" Ngwaọrụ, ma n'ebe ahụ, anyị na-ewepu akara ngosi ahụ, na-ahapụ ha naanị na "Opera" gbochie na-esote "Oghere Ịntanetị" na "Kuki" parameters. Pịa bọtịnụ "Analysis".
A na-enyocha ọdịnaya ahụ. Mgbe ị gụsịrị analysis, pịa bọtịnụ "Nhicha".
Ihe nchịkọta CCleaner na-ewepụ kuki na faịlụ echekwara na Opera.
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ụzọ atọ iji kpochapụ kuki na ịchekwa na ihe nchọgharị Opera. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-atụ aro ka ị jiri nhọrọ ịhichapụ ọdịnaya site na nyocha nchọgharị. Ọ bụ ihe ezi uche iji jiri ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na, na mgbakwunye na ihichapụ ihe nchọgharị ahụ, ịchọrọ ịmechapụ usoro Windows ahụ dum.